Xildhibaannada aqalka sare oo ansixiyey hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha – AwKutub News
Xildhibaannada aqalka sare oo ansixiyey hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha
By awkutubnews October 31, 2018
Leave a Comment on Xildhibaannada aqalka sare oo ansixiyey hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha
Xildhibannada Aqalka Sar ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeedka kheyraadka biyaha iyo sameynta hay’adda mareynta biyaha qaranka.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo Kheyraadka biyaha Cismaan Libaax Ibraahin oo goob joog ka ahaa kulanka ayaa xildhibannada ka codsaday inay meel mariyaan hindise sharciyeedkan.
Cismaan Libaax Ibraahimayaa xildhibannada aqalka Sare u sheegay in sharcigan inuu howlo badan uga xiran yahay wasaaradda.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulahi oo shir guddoominayay kulanka ayaa sheegay in xildhibannada cod gacan taag ah ay ku meel mariyeen hindise sharciyeedka kheyraadka biyaha iyo sameynta hay’adda mareynta biyaha qaranka.
“Xildhibannada aqalka sare sharcigan cod gacan taag ah ayay u qaadeen, waxaa ogolaatay 29 xildhibaan oo kulanka joogay , ma jirto cid diiday, ama ka aamustay” ayuu yiri guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulahi.
Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha iyo sameynta hay’adda mareynta biyaha qaranka ayaa waxaa horey u soo ansixiyay xildhibannada golaha shacabka iyadoo kadibna loo gudbin doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo si u ansixiyo.
Tags: Aqalka Sare Baarlaman Muqdisho Soomaaliya Wararka
Muslimiin lagu weeraray Masaajid ku yaala dalka New Zealand March 15, 2019
Madaxweynaha Faransiiska oo ku yimid Kenya March 14, 2019
Shirka suuqgeynta shidaalka Soomaaliya oo maanta London ka furmaya February 9, 2019
Wararkii u dambeeyey ee Wadahadalladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Daalibaan January 25, 2019
Sacuudiga ma ka fileysay tartanka heesaha iyo qoob ka cayaarka? January 25, 2019
Fadlan Like saar
Nagala soco twitter-ka
Sanad wanaagsan, Sanadka Cusub 1440 ee Sanadaha Islaamka
​4 tallaabo oo aad ku xoojin kartid kalsoonida naftaada
Faa'iidooyinka laga helo Mooska
Boorso Smart Ah Oo La Soo Saaray
Sawirro : Kulliyadda TurkSom ee Muqdisho oo tababar loogu soo xiray 47 Sarkaal
Dib u Raac Wararkeena
Previous Entry Sawirro : Dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Aduunka oo Muqdisho ku kala saxiixday 80$ milyan
Next Entry Turkiga Oo Shaaciyay Qaabkii Loo Dilay Wariye Jamaal Khaashuqji
AwKutub News waa Websayt madax banaan, kaasoo loo aasaasay in ay aqrista-yaashiisa ka hagar baxaan wararka kala duwan ee ku saabsan Soomaalida, Geeska Afrika, Carabta iyo wararka Caalamka ee xiriirka la leh dadka Soomaaliyeed.
Contact us : awkutubnews@gmail.com
Rukumo AwKutub News
Ku qor halkan cinwaanka emailkaaga si aad u raacdo Websayt-kan oo aad u hesho ogaysiisyada wararka cusub email ahaan
Copyright © 2019 AwKutub Media Network